बाँकेमा काेराेनाबाट मृत्यु भएका २५ वर्षीय युवाको दर्दनाक कथा, मुम्बईदेखि क्वारेन्टाइनसम्म के के भयाे ? — Sanchar Kendra
बाँकेमा काेराेनाबाट मृत्यु भएका २५ वर्षीय युवाको दर्दनाक कथा, मुम्बईदेखि क्वारेन्टाइनसम्म के के भयाे ?
०६० सालमा राप्ती नदीमा आएको बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगायो । ०७१ मा फेरि राप्तीकै बाढीले बचेखुचेको जमिन र घरसमेत सोहोर्‍यो । परिवार नजिकैको सामुदायिक जंगलमा विस्थापित भएपछि उनका कठोर संघर्षका दिन सुरु भए । यो कथा आइतबार क्वारेन्टाइनमै कोरोनाले ज्यान गुमाएका बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय युवक (नाम गोप्य)को हो । विश्वराज पछडङ्ग्याले नयाँत्पत्रिका देनिकमा समाचार लेखेका छन् ।